China Readymade Roller Blinds Exporters na Company | ETEX
Ihe mkpuchi mechiri emechi bekee bụ ihe kachasị ewu ewu n’ụwa ugbu a maka ịchọ mma windo. Were uru nke ọrụ dị mfe, ụdị dị mfe, nhọrọ na-adịghị agwụ agwụ nke akwa. Ndị mmadụ na-ahọrọ Roller kpuchie ọtụtụ maka ihe ịchọ mma. Ndị na-agụchi ihe mkpuchi na-enye ihe mkpuchi na akwa akwa jikọtara ọnụ, onye ahịa nwere ike imeghe ma wụnye ya N'onwe Gị. Mfe ịwụnye na mfe ịgbanwe.
Roller kpuchie ọrụ:
Blinds Roller blind is blind, bara uru na vasataal ịchafụ windo nke bụ ọdịnala ma dị ugbu a.
Ihe mkpuchi na-enye gị ohere ịmepụta ọnọdụ ziri ezi na ikuku ịchọrọ maka ụlọ gị ngwa ngwa
Igwe kpuchie dabara nke ọma na windo nke ọ bụla, ma na-enye uwe mara mma, anya ọgbara ọhụrụ n'ihe ndozi gị.
Igwe kpuchie ya na-abịa n'ụdị dị iche iche nke ihe ndị dị na mbara anwụ nke anwụ gụnyere klọọkụ, translucent, yana anwụ anwụ.
Nwekwara ike ịnwe njikwa zuru oke site na mkpuchi ihe abụọ ma gbanwe site na translucent, ma ọ bụ ihe mkpuchi anwụ na-agbazi oge ọ bụla, na-ejigide ụlọ dị mma n'afọ niile. Ejiri ngwaọrụ nchịkwa etinyere ngwaọrụ iji mee ka nchekwa nwa gị sie ike.
Onye na-eme mkpọtụ na-emechi anya:
N'ọtụtụ ebe iji na Café, School, Home, Comercial Ebe, ụlọ ahịa, ulo, ụlọ ọgwụ na ebe obibi ndị ọzọ. Onye na-eme mkpuchi na-emechi anya na-ejikwa ime ma ọ bụ na mpụga. Dabere na nhọrọ na-adịghị agwụ agwụ nke ihe ndị a na-ahụ anya na sistemụ.
Jiri aka gị rụọ ọrụ
Ugboro abụọ Igwe kpuchie
Ihe Ntughari Anya
Igwe kpuchie 17mm Mini Roller maka ịchọ mma windo
Ihe eji eme ihe, 100% polyester
Ihe mkpuchi mkpuchi mkpuchi acrylic
Oke ngwa ngwa> Australia 4.5 Grade
Aluminium Roller Alumini 17/25/28/32/35/38 / 40mm
Bottom Rail Aluminium alloy, larịị okirikiri / arc udi / udi gburugburu
Eriri akwara sisitemu eriri eriri eriri / olu plastic / agbụ ígwè / onye na-ejide ya
Rightzọ arụ ọrụ aka nri na aka ekpe
Ejiri Maka Ime, Bedlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, mbara ihu, Ebe a na-anọ ọdụ, Hotel, Office wdg
Moderndị Oge A Dị Mfe
Dingme ihe eji arụ ọrụ, mkpuchi ọkụ
Osote: Ihe mkpuchi / akwa ndị Rome